उसले मलाई कापीको पानामा लभलेटर दियो– अभिनेत्री असिस्मा - Ratopati
पछिल्लो समय उदाएकी अभिनेत्री हुन्– असिस्मा नकर्मी । म्युजिक भिडियो हुँदै ठूलो पर्दामा जम्प गरेकी उनी पछिल्लो समय फिगर कोकाकोला कारणले चर्चित छिन् । चलचित्र ‘अर्धकट्टी’ अभिनय सिलसिलामा उनले ‘फिगर कोकाकोला..’ बोलको गीतमा आइटम नृत्य गरेकी थिइन् । छोटो समयमै अन्तराल, बाटोमुनिको फूल–२, अर्धकट्टी, बुद्ध बर्न इन नेपाल, राधे, लभ यू बाबा, श्री ५ अम्बरेलगायत दर्जन हाराहारीका चलचित्र अभिनय गरेकी असिस्मा अहिलेसम्म हिट अभिनेत्रीको सूचीमा भने समाहित हुन सकेकी छैन । तर पनि उनको हातमा लगातार चलचित्र परिरहेका छन् । ‘कर्म गरौँ फलको आसा नगरौँ’ भन्ने मान्याता बोकेकी अभिनेत्री असिस्मासँग रातोपाटीले राखेको दश प्रश्नः
घरमा बस्दा सौदर्यलाई त्यति ख्याल गर्दिनँ । बाहिर हिँड्दाको कुरा गर्दा कहाँ जाने र केका लागि जाने भन्ने कुरामा भरपर्छ । नर्मल मिटिङमा जानु छ भने म हल्का फाउन्डेसन क्रिम मात्र लगाउँछु । इभेन्टहरुमा जानु पर्दा ठिकै खालको मेकअप गर्छु । अवार्ड समारोहमा जानु छ भने मेकअप आर्टिस लिएर जान्छु । समयको कुरा गर्ने हो भने दश मिनेटदेखि आधा घन्टाभित्र रेडी हुन्छु । म भित्री सुन्दरतामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । बाहिर सुन्दरता भनेको क्षणिक लाग्छ ।
एक्सरसाइज पनि गर्नु हुन्छ होला नि हैन ?
एक्सरसाइज घरमै गर्ने गरेकी छु । जिम जाने गरेकी छैन । मेरो शारीरिक बनावटलाई जे–जे चाहिन्छ त्यो एक्सरसाइज घरमै गर्ने गरेकी छु । मेरो शरीर छिट्टै घटबड हुने खालको छ । यसलाई मेन्टेन गर्न थरिथरिको एक्सरसाइज गर्छु । पेटका लागि पनि गर्ने गरेकी छु । पहिले योगाा जान्थेँ । अहिले छाडिदिएँ ।
कस्तो फेसन रुचाउनु हुन्छ ?
बजारमा जे चलेको छ, त्यो लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यताकी केटी होइन म । जे सुहाउँछ मलाई त्यो लगाउँछु । मलाई मौसम अनुसारको पहिरन लगाउन मनपर्छ । फेसनको नाममा बेमौसमी पहिरन लगाएर कहिलै हिँडेकी छैन । हिँड्दिन पनि ।
मनपर्ने खाना नि ?
सबै प्रकारको खाना मनपर्छ । म एकदमै फुडी छु । नेवारी खानाको आइटम अधिकांश मनपर्छ । त्यसको म क्रेजी नै हँु ।
तपाईंको कुन अङ्गमा पुरुष लोभिने गरेका छन् ?
आँखामा धेरैको हेराइ देख्ने गरेकी छु । धेरैले तिम्रो सबैभन्दा राम्रो आँखा भन्ने गरेका छन् । सायद यसैमा लोभिन्छन् होला । केही मेरो बोली पनि भन्छन् ।
बाहिरी सौन्दर्यमा म विश्वास गर्दिनँ । त्यसैले राम्रो स्वभाव भएको जेन्टल पुरुष नै मलाई मनपर्छ ।
डराउने सपना देख्नुभएको छ कि छैन ?
देखेकी छु । किन नदेख्नु नि । कहिले काहीँ धेरै तर्सिएको सपना देख्छु । टिभी तथा हलमा गएर चलचित्र हेर्दा पनि डरलाग्दा दृश्य भएका सामग्री हेर्न सक्दिनँ ।
पूरा नभएका सपना छन् कि छैन ?
धेरै छन् । एक सपना पूरा गर्यो अर्काे सपना जन्मिन्छ । त्यसैले नभनौँ होला है ।
पहिलो प्रेम प्रस्ताव कहिले आयो ?
कक्षा ५ मा पढ्दा खेरी पहिलो लभ लेटर आयो । चार कक्षामा सँगै पढेको, मसँग धेरै मिल्ने साथीले ५ कक्षामा पुगेपछि स्कुल परिवर्तन गर्यो । स्कुल परिवर्तन गरेपछि उनले मलाई कापीको पानामा लभलेटर दियो ।
रोजेको व्याक्तिसँग डेटिङको अफर दियो भने ?
हाम्रा चलचित्रकर्मीसँग त मैले यस्तो कहिलै सोचेकी छैन । किनभने सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी मेरो पारिवारिक सदस्यजस्तै लाग्छ । बलिउड गायक आसिफ मलाई एकदमै मनपर्छ । उनीसँग नै जान चाहन्छु ।